DriverIdentifier v5.2 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ကအခမဲ့ယာဉ်မောင်း Updater)
Software ကို & Apps ကပ Backup ကို & အသုံးအဆောင်များ
DriverIdentifier ၏တစ်ဦးကအပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, တစ်ဦးအခမဲ့ယာဉ်မောင်း Updater ကို Tool ကို
DriverIdentifier သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည် အခမဲ့ယာဉ်မောင်း Updater tool ကို သငျသညျသန်း 27 ကျော်မှ access ကိုပေးသည်ကြောင်း device driver ဟာ downloads, ။
သည်အခြား features တွေအနက် program ကိုတစ်ဦးခရီးဆောင်တည်နေရာကနေ run နိုင်ပါတယ်နှင့်ပင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
[Driveridentifier.com | သိကောင်းစရာများ Download & Install ]
မှတ်ချက်: ဤသုံးသပ်ချက်ကို DriverIdentifier ဗားရှင်း 5.2 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပျတဲ့ဗားရှင်းအသစ်ကိုရှိပါတယ်လျှင်ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ပေးပါ။
DriverIdentifier Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်းကိုအထောက်အပံ့နှင့်သင်တိုအဘယ်သို့သောအကြောင်းသည်အလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည်, သင်သည်အဘယ်အရာကိုရတဲ့နေ:
များအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုတွေ့ 32-bit နဲ့ 64-bit နဲ့ ဗားရှင်း Windows 10 ကို , Windows 8 ကို , Windows7ကို , Windows Vista က များနှင့် Windows XP ကို
သင်အဲဒီ updates များကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သူတို့ကို run ရပါမယ်ဘယ်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းယာဉ်မောင်းနောက်ဆုံးသတင်းများမှလင့်များဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအလုပ်လုပ်တယ် DriverIdentifier
အဆိုပါဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနှင့် ဗားရှင်းနံပါတ် လက်ရှိ installed ရဲ့ယာဉ်မောင်း၏အဖြစ်အသစ် updated driver ကိုဗားရှင်းသောဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြသနေကြသည်
သငျသညျ DriverIdentifier ကနေ download လုပ်ပါယာဉ်မောင်း၏အချို့မဟုတ်ဘဲအားလုံးပါလျှင်, ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကနေတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များမှာ
DriverIdentifier Pros & amp; အားနည်းချက်များ
အလားတူဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ဘုံသော်လည်း DriverIdentifier setup ကိုစဉ်အတွင်းသက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါဘူး
ကားမောင်းသူ updates များကိုရမယ့် download စာမျက်နှာတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း updates များကိုရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်
သငျသညျ drivers တွေကို download လုပ်နိုင်မတိုင်မီ DriverIdentifier နှင့်အတူအခမဲ့အကောင့်အတွက် register ရှိရမည်
DriverIdentifier ဖြစ်ကောင်းစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြုပါတယ်အရိုးရှင်းဆုံးကားမောင်းသူ Updater အစီအစဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာကိုလည်းသုံးစွဲဖို့တော်တော်လေးရိုးရှင်းရဲ့အလားတူ software ကိုဖွင့်ပေမယ့်ကျိန်းသေဒီမလွယ်ကူပါဘူး။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလွန်ပေါ့ပါးသည်နှင့်သုည setting များကိုရှိပါတယ်။ သင်ရုံကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စတင်ရန်တဦးတည်း button ကို click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဘေးဖယ်စီစဉ်ထား Scan ဖတ်နဲ့တူအတော်လေးဘုံအင်္ဂါရပ်များမရှိခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းကို download လုပ်မယ့် user account များ၏လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်, DriverIdentifier လည်းသင်အလားတူပိုမိုအဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်ယူရှိသည်မယ်လို့ထက်ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန်အနည်းငယ်အပိုဆောင်းခြေလှမ်းများယူစေသည် တူ Driver Booster ။
DriverIdentifier နှင့်အတူယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ, သင် download link များစာရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ သင်ရှာနေတာ 100% သေချာမနေလျှင်, သင်အလွန်လွယ်ကူစွာမှားကားမောင်းသူကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သို့သျောလညျးသငျသညျအမြားဆုံးကတခြားယာဉ်မောင်း Updater tools များအတွက်လက်ရှိမဟုတျကွောငျး DriverIdentifier နှင့်အတူတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုအော့ဖ်လိုင်းစကင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုသင်တို့အားငါထို့နောက်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ပါဘူးတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖွင့်နိုင်မယ့်ဖိုင်ရလဒ်ကယ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုအတင်းဖို့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလို့ခေါ်တဲ့စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားကို tick ။
ဒါဟာသင်ယာဉ်မောင်းများပေါ်တွင် install လိုအပ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာအင်တာနက် access ကိုမရှိပါဘူးတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်အများကြီးသင်ထွက်ကိုကူညီနိုင်မယ့်အလွန်အသုံးဝင် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: DriverIdentifier ၏အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းဟာသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုတဦးအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပညာရှိတဲ့ Registry Cleaner ကလည်း v9.61
Windows ကိုကုန်ပစ္စည်း Key ကို Finder ကို v1.0
4 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က Windows Password ကို Recovery ကို Tools များ
ချစ်စရာ Partition ခွဲ Manager ကို v0.9.8
EaseUS Data Recovery Wizard ကို v12.0
HD ကို Tune v2.55 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
3 အခမဲ့အပြည့်အဝ Disk ကိုလျှို့ဝှက်ကုဒ် Programs ကို
လုပ်နည်း Backup ကို iPhone က SIM ကဒ်မှဆက်သွယ်ရန်
ဆန်းစစ်ခြင်း: PDP Afterglow Prismatic ကြိုးမဲ့ဂိမ်းနားကြပ်
အဆိုပါ Wii U အသစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ
MacKeeper Remove လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့အဖုံးဓာတ်ပုံအဖြစ် Instagram ကိုမှ Collage ဖန်တီးနည်း
Hammer ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေး Item ID ကို Code ကိုပြန်လည်ပြုပြင်
.deb အထုပ်များ Install လုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မျက်နှာပြောင်းလဲနည်း
Yahoo! အားလုံးမဖတ်ရသေးသောမက်ဆေ့ခ်ျများရှာပါဖို့ကိုဘယ်လို စာပို့
ကလပ်ကို Nintendo ဖို့ဘာဖြစ်သွား?
Apple က TV ကိုဖွင့် 4th Generation အဖွဲ့, ကောင်းမွန်သောမကောင်းပါနှင့်ရုပ်ဆိုးတဲ့အရောအနှော
အဆိုပါ SNES အတွက် "Demon ရဲ့မောက်" cheat
Excel ကို Format ကိုပန်းချီဆရာ: Copy ကူးဖောမတ်ချဆဲလ်အကြား
သင်၏ Chromebook အပေါ် Smart Lock ကို Set Up လုပ်နည်း
PowerPoint ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချအကြောင်း6သိကောင်းစရာများ